Wenger: Waxaan doonayey in aan bilaash ku fasaxo Coquelin
HomeWararka MaantaWenger: Waxaan doonayey in aan bilaash ku fasaxo Coquelin
04/03/2015 Abdiwahab Ahmed
Macallinka kooxda Arsenal ee Arsene Wenger ayaa daboolka ka qaaday in uu isku diyaarinayay in uu bilaash ku fasaxo Francis Coquelin ka hor intii aanu fursadda siinin xili-ciyaareedkan.
Laacibkan khadka dhexe ayaa wakhti amaah ah ku soo qaatay naadiga Charlton Athletic bilowgii hore ee xili-ciyaareedka waxaanu dib ugu soo laabtay Arsenal bishii December markaas oo uu ka mid noqday ciyaartooyada ugu wanaagsan kooxdaas ee khadka dhexe ee uu dagaal galo Wenger.
23 jirkan ayaa markii uu Wenger arkay in uu kooxdiisa wax wanaagsan u horseedayo ayaa uu heshiiska u cusbooneysiiyey bishii February ee hadda dhamaatay, laakiin waxa uu sheegay in uu khalad samayn gaadhay isla markaana uu ku fikiri jiray in uu bilaash ku fasaxo bisha June laacibkan.
“Qof kasta layaab ayay ku tahay. Waxa kaliya ee aan sameeyo ahaa ah in aanan waligay odhanin qofna waxaa waligii ma samayn karayo. Markaad ila shaqaynayso waa inaad maskax furnaato, aad go’aamo gaadhi karto mararka qaarkood. Laakiin waligaa ma aha in aad qofna albaabadaada ka xidhid” sidaas waxa yidhi tababare Wenger oo ka hadlayay in layaab ay ku tahay in uu laacibkani bandhig ciyaareedka heerka sare ah la yimaaddo.
Wenger waxa uu sheegay in ciyaartoygani aanu bilowgii xili-ciyaareedka ku jirin qorshihiisa waxaanu yidhi: “Bilowgii xili ciyaareedka kumuu jirin qorshahayga. Waxa aan u sheegay in uu is muujiyo illaa kirismaska (December), kadibna dhamaanteen waynu wada aragnay halka uu gaaadhay”.
Wenger waxa uu sheegay in uu hadda helay booskii ugu fiicnaa eek u habboonaa Coquelin oo ah khadka dhexe ee difaaca xigta.
23/02/2018 Abdiwahab Ahmed
Klopp Oo Hoosta Ka Xariiqay In Guusha Liverpool Cabsi Iyo Wel-wel Ku Abuurayso Chelsea
Xulka Iceland Oo Sida Geesiyaasha Loogu Soo Dhaweeyey Wadankooda + Sawiradii